Nahazo Tsikera Mafy Ny Resaka Kolontsaina VIP Ao India Manoloana ny Fandehanan’ny Praiministra Singapaoreana Fiara Fitateram-bahoaka Tao India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2016 5:30 GMT
Praiminisitr'i India Shri Narendra Modi sy ny praiminisitr'i Singapaoro Lee Hsien Loong, ao amin'ny Trano Fisakafoanana Komala Vilas, Little India, Singapaoro tamin'ny 23 Novambra 2015. Sary tao amin'ny Wikimedia. CC BY-SA 2.0
Misy ny lolom-po tsy mitsaha-mitombo eo amin'ny olon-tsotra ao India noho ny “kolontsaina VIP (Olo-Manan-kaja Ambony)”, sy ny fomba fitadiavan'ireo mpanao politika sy mpiasa birao fikarakarana manokana amin'ny lafim-piainana rehetra noho ny toerana misy azy ireo. Matetika miseho amin'ny lohatenim-baovao ny fihetsik'izy ireo, tahaka ny tanjozotram-piara mitondra VIP miaraka amin'ny fiarovan'ny polisy marobe izay manakana ny fifamoivoizana sy ny olona mandritra ny ora maro, anisan'izany ny fiara mpitondra marary. Amin'ny ankapobeny, telo ireo polisy miaro VIP iray raha polisy iray monja kosa no hiaro olompirenena tsotra maherin'ny 700.
Izay no mety mahatonga ny praiminisitra Singapaoreana Lee Hsien Loong, izay tonga tao Delhi tamin'ny Alatsinainy 3 Oktobra mandritra ny fitsidihana dimy andro ho toa mitondra rivotra madio ho an'ny Indiana maro. Najanony ny fomba fanaon'ny manampahefana voahodidina mpiaro miaraka amin'ny fiara marobe fa nisafidy fiara fitateram-bahoaka nofaina ho an'ny tenany, ny vadiny Ching Ho sy ny delegasiona ahitana ireo minisitra lehibe, mpikambana ao amin'ny parlemanta sy manam-pahefana ambony izy raha hihazo ny hotelin'izy ireo.
Noderain'ireo mpisera media sosialy ity fomba tsy mahazatra amin'ny fandehanana nataon'ny delegasiona iraisampirenena ity.
No fancy limo, Singapore PM boards a bus from the airport to the hotel. #FTW https://t.co/X0cMpkAOj6
Tsy limousine raitra, fa mandeha fiara fitateram-bahoaka niainga tao amin'ny seranam-piaramanidina hamonjy ny hotely ny praiminisitra Singapaoreana
Maro ny zavatra ianarana amin'i Singapaoro
Tamin'ny fitsidihana ao India, nosoloin'ny Praiminisitra Singapaoreana Fiara fitateram-bahoaka ny Kôrtezy VIP: tsy manana herim-po mba ho tsotra kokoa tahaka izao ny politisiana eto amintsika
“Tokony hanatsoaka lesona aminy isika ary miala amin'ity kolontsaina VIP eto India ity”
Mampiseho lonilony teo amin'ny olon-tsotra te-hahita ny fiafaran'ny kolontsaina VIP ao India ireo fanehoan-kevitra ireo. Mampiseho ny lahatsary iray navoakan'i Rajeev Ram tao amin'ny YouTube fa ahitana fiara 20 mahery ny tanjozotram-piara na kortezy ho an'ny lefitry ny ministra iray:
Akshaya Mishra tao amin'ny tranonkalam-baovao Firstpost nilaza fa manala baraka ny kolontsaina VIP:
Ao India, saika ny rehetra, na iza na iza no voaaro. Tena mahavariana tokoa ny lisitra: mpanao politika, minisitra, mpiasa birao, mpitsara, mpitarika fivavahana, mpanao heloka bevava, eny fa na dia ny havan'ny mpitondra aza.
Nandini tao amin'ny tranonkalan'ny Tanora Indiana iray nanoratra hoe:
Tsinotsinona ny kolontsaina VIP rehetra fa kolikoly amin'ny endriny hafa ao India, raha mahita VIP raisina toy ny mpanjaka ianao, misy olona nomena vola antsokosoko (kolikoly) ao ambadiky ny sehatra. Mampiditra fanao ratsy mahazatra amin'ny kolikoly ny VIPs sy ny olona manompo azy ireo ary matetika miady varotra mafy ny vahoaka amin'ny ankapobeny ahafahana miditra any amin'ny biraom-panjakana araka ny tokony izy.
R Jagannathan tao amin'ny Firstpost nihevitra fa tsy momba ny VIP ihany no olana; fa miraikitra eo amin'ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka izany ary vokatry ny fitaizana ratsy:
Tsy mandroso fahantany ny kolontsaina VIP. Avy amin'ny fihetsika ampianarintsika ny zanatsika sy ny tanora ao an-trano sy any an-tsekoly izany.
Misy hatrany ny fahatsapan-tena eo amin'ny vahoaka ao India manoloana ny fanararaotana tombontsoa ataon'ny VIP mandany ny volam-bahoaka. Maro ireo mihevitra fa tahaka ireo firenena Tandrefana maro, tokony raisina toy ny vahoaka tsotra ny VIP, ary tsy avela hanohintohina ny fifamoivoizana na omena tombontsoa mihoampampana.